जातिय विभेद विरुद्धको हकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेपनि कार्यन्वयन हुन नसक्नुको कारण के ? जेठ २७, २०७७
हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने स्थान र तिनले दिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ? हिंसापीडित महिलालाई आश्रय दिने स्थान र तिनले दिने सेवा कतिको प्रभावकारी छ ? विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरुसँग मध्य नेपालका लागी लिएको प्रतिकृया : मंसिर २८, २०७६
समान क्षमता भए पनि पुरुषलाई क्षमतावान् ठान्ने दृष्टिकोणलाई के भन्नु हुन्छ ? विभिन्न परिस्थितिले थिचिएका नेपाली महिलाहरू हिजोको तुलनामा अझ व्यापक काममा अग्रसर भएका छन् । आश्विन ८, २०७६
शासन फेरियो फेरिएन महानगरका दलितको जीवनस्तर समुदायमा अति पिछडिएका दलित समुदायका लागि हरेक स्थानीय तहले लाखौको बजेट विनियोजन गरे पनि सो बजेट लक्षित वर्ग भन्दा पनि सम्बन्धित निकायका व्यक्ति र जनप्रतिनिधिहरु स्वय्मकै खल्तिमा जाने गरेको गुनासो हरेक स्थानीयको बनेको छ । आश्विन ४, २०७६
संविधानमा सुनिश्चित हुँदा हुँदै पनि छुवाछुत र जातिय विभेद अन्त्य नहुनुको यस्तो छ कारण विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले जातीय विभेद र छुवाछुत बारे चेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्टी, सेमिनार संचालन गरिरहेका छन् । तर उपलब्धि शून्य छ । श्रावण २९, २०७६
अपराधिक कृयाकलापमा युवा पुस्ता बढि संलग्न हुनुको यस्तो छ कारण श्रावण २७, २०७६
महिलाहरुले सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन कस्ता उपायहरु अपनाउन जरुरी छ ? विपन्न परिवारमा आर्थिक तनावको कारण केही पारिवारिक खटपट हुने गर्दा बढि झगडा र हिंसाका घटना हुने गरेको भए पनि सम्पन्न परिवारमा भने पश्चिमा शैलीका कारण पारिवारिक कलह भित्रिने सम्भावना बढि भएको पाइएको छ । श्रावण २७, २०७६
महिला हिंसा न्युनिकरणमा स्थानीय सरकारलाई कतिको सहज वा चुनौति छ ? शिक्षित भनिएको परिवारमा अझ महिलामाथि हिंसा हुने गरेको कुरा छर्लङ्ग छ । देशभर छरिएर रहेका असरल्ल सरकारका अनुचरहरुको कुरा त झन खपिसक्नै छैन । आफ्नो तर्फबाट काम कुनै गर्नु छैन । श्रावण १९, २०७६
साउनमा लगाईने हरियो, पहेलो पहिरन, चुरा र मेहेन्दीको महत्व के छ ? यसमा युवाको आकर्षणलाई के भन्नु हुन्छ ? श्रावण १४, २०७६
स्थानीय तहमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? कस्तो हुनुपर्छ ? स्थानीय निकाय शिक्षा सम्बन्धी आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय जिम्मेवार रूपमा लिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउन त्यहाँ क्रियाशिल राजनीतिक दल, शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरू, सामाजिक संघ संस्था, शिक्षकका पेशागत संगठनहरू, आम जनसमुदाय लाग्नु जरुरी छ । श्रावण १३, २०७६
वृद्धवृद्धाको सम्मान र सुरक्षाको लागि वर्तमानमा के गर्नु पर्छ ? वृद्धवृद्धा भन्ने साथ हरेक कुराको अनुभवका धरोहर हुन् भन्ने कुरा बुझ्न उति गाह्रो छैन । तर आधुनिकताले गाँजेको वर्तमानमा प्रायः हरेक परिवारका बृद्धबृद्धालाई उनैका सन्ततिले अलि हेयको दृष्टीले हेर्ने गरेको कुरा घाम झैं छर्लङ्ग हुन थालेको छ । कतिले त आफ्ना बुबाआमा (वृद्धवृद्धा) लाई आफूसँग नराखी विभिन्न आश्रमहरुमा... असार १२, २०७६
वालविवाह न्यूनिकरण हुन नसक्नुलाई तपाई के भन्नु हुन्छ ? हाम्रो समाजमा विद्यामान कुरीतिहरु मध्ये बालविवाह प्रमुख कारक तत्वको रुपमा देखिएको छ । मूलुकमा संघीय ऐन लागु भइसकेको छ । नेपाल मूलूकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले विवाह गर्ने उमेर महिला वा पूरुष दुवैको लागि २० वर्ष हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिस वर्षभन्दा मुनी गरिने विवाह... असार ६, २०७६
युवा रोजगारका लागि स्थानीय सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ? युवा देशका कर्णधार हुन् भन्ने कुरा आजकल जो कोहीलाई राम्रै हेक्का हुन थालेको छ । अझ मुलुकभरीका सबै सरकारको नेतृत्व गरेका जनताका जनप्रतिनीधिहरुलाई यो कुराको हेक्का नहोला भन्नु बेइमानी हुन्छ । तर वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने बेइमानी चाही जनप्रतिनीधिहरु नै भइदिंदा नेपाली युवा सयौंको संख्यामा हरेकदिन विदेश... असार २, २०७६
शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको बेतिथिलाई कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ? शिक्षामा बढ्दो राजनीतिकरणले गर्दा शिक्षाकोस्तर दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ । शिक्षक महासंघ विभिन्न शिक्षक संगठन लगायतको अवरुद्धले गर्दा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै गएको छ । संविधानमा गरिएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौति थपेको भन्दै अध्ययनकर्ता संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको... पुष १७, २०७५